Xog: Madaxda HirShabelle oo DF ugu hanjabay in ay ka baxayaan heshiiskoodii - Caasimada Online
Home Warar Xog: Madaxda HirShabelle oo DF ugu hanjabay in ay ka baxayaan heshiiskoodii
Xog: Madaxda HirShabelle oo DF ugu hanjabay in ay ka baxayaan heshiiskoodii
Jowhar (Caasimada Online) – Madaxweynaha HirSabelle Maxamed Cabdi Waare iyo ku-xigeenkiisa Cali Guudlaawe ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin fulin la’aanta dhanka dowladda ah ee heshiisyadii ay la galeen maamulka HirShabelle.
Sida ay noo sheegeen il-wareedyo ku dhow, Madaxda HirShabelle ayaa sheegay in heshiisyo ay kamid ahaayeen dhismaha wadooyin, madaxtooyada, iyo xafiisyo dowladeed iyo heshiisyo kale aysan dhamaantood midna ka dhaqan gelin.
Sidoo kale hogaanka HirShabelle ayaa sheegay in waxyaabo kale oo fududeen ahaa oo ay ku heshiiyeen madaxda dowladda aysan ilaa hadda waxba ka qaban dowladda Soomaaliya, iyagoo shaki ka muujiyay sida ay ula sii shaqeen karaan madaxda dowladda Soomaaliya.
HirShabelle ayaa galaysa marxalad doorasho ah, waxayna hogaamiyaasha maamulkaas qaarkood hami ka qabaan iney soo laabtaan iyagoo damacsanaa iney wax qabad ka dhigtaan mashruucyadaas loo balan qaaday.
Madaxda HirShabelle ayaa shalay taageeray dadaallada lagu raadinayo in wadahadal loo qabto dowladda dhexe iyo maamul gobaleedyada, qorshahaas oo ay wadaan Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Go’aanka HirShabelle kasoo baxay, ayaa lagu macneeyey farriin loo dirayo madaxda dowladda looguna sheegayo in HirShabelle aysan ku faraxsaneyn xiriirka labada dhinac.
Mar kasta oo la gaaro xiliga kala guurka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa kala fogaada siyaasiinta Soomaaliya iyagoo ku kala taga aragti ku saabsan marxaladda kala-guurka ah.